I-Apartment No. 1 kwiziko lokuzonwabisa kwi-Danube 4 abantu - I-Airbnb
I-Apartment No. 1 kwiziko lokuzonwabisa kwi-Danube 4 abantu
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguЕкатерина
Iziko lolonwabo eCambodia kwiDanube eVilkovo yindlwana evalelweyo:
1. enye ukuya kwiindwendwe ezi-4 kunye ne-terrace ejongene nomlambo waseDanube; 2. i-cottage enkulu enamagumbi okulala ama-2 kunye nomthamo wabantu abayi-6;
3. Indlwana enkulu enamagumbi amane ahlukeneyo aneendawo zokungena ezine ezahlukeneyo.
Amafulethi anokuhlala abantu aba-4.
SIku-Instagram @ kambodzha.vilkovo
Esi sibhengezo sibonisa enye yee-APARTMENTS ezi-4 kwi-COTTAGE ENKULU, zonke zifana omnye komnye, umehluko apho iifestile zijongene nazo: kwiindlela ezahlukeneyo ze-4 (3 - kumanzi omhlaba kwintsimi kunye ne-1 ukuya echibini).
Le ndlu inokufikelela kwi-pool terrace.
Isikwere sendawo nganye siyi 30-36 yesikwere.
Onke amagumbi aneekhitshi zabo ezincinci (ngaphandle kwesitovu - sinokubonelela ngesicelo), amagumbi okuhlambela aneshawari, amagumbi okulala anebhedi enkulu ephindwe kabini kunye nebhedi enkulu yesofa ekhitshini-igumbi lokuhlala. Zonke zineendawo zazo ezijonge uMlambo iDanube, ichibi kunye nezinye iindawo ezinamanzi kulo mmandla. Amathafa axhotyiswe ngefanitshala kunye neentyatyambo zasekhaya.
Ifulethi ngalinye linayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile: iketile, ifriji, itafile, izitulo, izitya, iimela, iikomityi, ibhedi yelinen kunye neetawuli, njl.
Ndingathanda ukuqaphela ubukho beepier ezininzi eziya kuMlambo waseDanube, into ebalulekileyo kwiindwendwe. Ubungasese, ukuzola kunye nentuthuzelo.
Ukuloba (kubandakanywa nohambo lokuloba eziqithini), uhambo olujikeleze iVilkovo luyafumaneka kwiindwendwe, kwaye ukuhamba ngesikhephe kunye nokuhamba ngesikhephe kunokusetyenziswa njengokuzonwabisa.
Ukhetho oluhle kakhulu kwiholide yakho.
Iintsuku eziyi-7 e Vylkove
Iziko lokuzonwabisa "Cambodia" ibekwe kwindawo entle kakhulu kwisixeko Vilkovo, Odessa kummandla, ekunene elunxwemeni loMlambo iDanube (umgca wokuqala) kwintsimi Danube Biosphere Reserve. Indawo enhle nenokuthula, efanelekileyo kuzo zonke iintlobo zokuzonwabisa (zombini intsapho kunye nenkampani kunye neyothando, njl.).
IDelta yaseDanube inezona zityalo zityebileyo. Iphupha labalobi kunye nabasetyhini.
Kwaye ubungakanani beentlanzi ngamanye amaxesha bothusa abona bathanda ukuloba abanamava.
Yiza kuthi, sinayo yonke into, sifuna wena kuphela :)
Bhukisha kule ndawo, siya kuqhagamshelana nawe kwaye sixoxe ngawo onke ama-nuances.